विमला तुलाचनको गीति एल्बम ‘मेरी आमा’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गीतकार विमला तुलाचनको गीति एल्बम मेरी आमाको लोकार्पण गरिएको छ । राजधानीको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आयाेजितविशेष समारोहका बीच एल्बमको लोकर्पण गरिएको हो । गीतकार सङ्घ नेपालको आयोजनामा भएको समारोहमा प्रमुख अतिथि सङ्घका सल्लाहकार, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिष्ठीत गीतकार...
‘साहो’ बन्यो दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो स्क्रिनमा रिलिज हुने पहिलो फिल्म
काठमाडौँ, एजेन्सी । चर्चित फिल्म बाहुबलीका नायक प्रभासले अभिनय गरेको फिल्म &#39;साहो&#39; ३० अगस्ट शुक्रवारका दिन भारतको १०० भन्दा बढी स्क्रिनमा रिलिज भयो । रिलिजसँगै यो दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो स्क्रिनमा रिलिज हुने पहिलो फिल्म बन्न पुगेकाेछ । चेन्नईभन्दा ८०...
९ सय जनाले ५ मिनेटसम्म लोक नृत्य गरेर विश्व रेकर्ड कायम
काठमाडौँ, एजेन्सी । मेक्सिकोको जलिस्कोमा करिब ९ सय जनाले पारम्परिक सङ्गीत मारियाचीमा नृत्य गरेर विश्व रेकर्ड बनाएका छन् । यसलाई गिनीज बुकमा पनि दर्ता गरिएको छ । योसँगै यसअघि मेक्सिकोकै गुआडालाजारामा सन् २०११ मा ४५७ जना सहभागीद्वारा बनाइएको वर्ल्ड रेकर्ड...
फिल्मको छायांकनकाे लागि दुई दिनसम्म पोर्चुगलकाे पुल बन्द !
लोकसंवाद संवाददाता, भदौ १४, २०७६
काठमाडौं, एजेन्सी । ऋतिक रोशन तथा टाइगर श्राफ अभिनीत एक्शन फिल्म वारको शूटिंगका लागि पोर्चुगलको पोर्टो शहरको सबैभन्दा ठूलो लुइस पुल दुई दिनका लागि बन्द गरिएको समाचार छ । फिल्मका निर्देशक सिद्धार्थका अनुसार आखिर कुन त्यस्तो फिल्मको शुटिंगका कारण दुई...
दैनिक ५.६ लाख डलर कमाउने गायिका
काठमाडौँ, एजेन्सी । फोर्ब्स पत्रिकाले सङ्गीतमा सबैभन्दा बढीकमाई गर्ने गायकगायीकाहरुको सूचीसार्वजनिक गरेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने गायिकाका रूपमा ट्रेलर स्विफ्ट पहिलो नम्बरमा परेकी छन् । फोर्ब्सका अनुसार, हाइएस्ट पेड सेलिब्रेटी टेलरको वार्षिक कमाई १८५ मिलियन डलर रहेको...
‘अग्निदहन’ मलेसिया, सिङ्गापुर र थाइलैण्डमा प्रदर्शन हुँदै
काठमाडाैँ । बोक्सी प्रथा विरुद्ध तयार पारिएको चलचित्र अग्निदहन विदेशमा प्रदर्शनको तयारी भइरहेकाेछ । मान्छे बोक्सी हुन्न कहिल्यै राष्ट्रिय जागरण प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा यही साता मलेसिया, सिङ्गापुर र थाइलैण्डमा अग्निदहन प्रदर्शन हुँदैछ । तीनवटै देशमा रहेका नेपाली दूतावासको व्यवस्थापनमा सो...
रेडियो महाकालीको आयाेजनामा महिला देउडा प्रतियोगिता शुभारम्भ
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख चाड गौरा पर्वका अवसरमा २०७६ भाद्र ७ गते आइतबारदेखि कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा महिला देउडा प्रतियोगिता शुभारम्भभएको छ । रेडियो महाकालीको आयोजनामा विगत चार वर्षदेखि आयाेजनाहुँदै आएको हुक्काचिलिम महिला देउडा प्रतियोगितामा जिल्लाका यस पटक छ वटा महिला...
भारतीय चलचित्र जगतका उत्कृष्ट सङ्गीतकार जहूर खय्यामको निधन
काठमाडौं, एजेन्सी । सदाबहार फिल्म कभी कभीको कर्णप्रिय दार्शनिक गीत मै पल दो पल का शायर हुँ, का संगीतकार जहूर खय्यामको निधन भएको छ । भारतीय चलचित्र जगतमा उत्कृष्ट संगीतकारका रुपमा स्थापित खय्यामको सोमबार राति निधन भएको हो । ९३...
प्रतियोगितामा मैथिली गीत
धनुषा । विलुप्त हुँदै गएको मैथिली संस्कार गीतको संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यले २०७६ साउन ३२ गतेशनिबार मैथिली संस्कार गीत गायन प्रतियोगिताको आयोजना गरियो । सखी बहिनपा मिथिलानी समूह जनकपुरधामद्वारा आयोजित सो प्रतियोगितामा बालदेखि वृद्धासम्मको सहभागिता थियो । प्रतियोगितामा पूर्णकला...
दुरा समुदायका १५ पूजाः ‘गाउँ बार्ने’देखि ‘थासो फाल्ने’सम्म
यमबहादुर दुरा, श्रावण ३१, २०७६
बृहत्तर हिसाबले हेर्दा विश्वमा मुख्य चार नश्लका मानिस छन् द्रबिडियन, ककेसियन, मङ्लोइड र नेग्रो । शारीरिक बनोटको दृष्टिले हेर्दा दुरा जाति मङ्गोल नश्लअन्तर्गत पर्दछ । नेपाल सरकारले दुरा जातिलाई अल्पसंख्यक जनजातिमध्ये एक मानेको छ । नेपाली बृहत् शब्दकोश ले दुरा...
आयुष्मान खुराना तथा विक्की कौशललाई नेशनल फिल्म अवार्ड
काठमाडौं, एजेन्सी । सन् २०१८ को भारतको ६६ औं नेशनल फिल्म अवार्ड यसपटक आयुष्मान खुराना तथा विक्की कौशललाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको छ । अंधाधुन फिल्ममा उनको जर्बजस्त अभिनयलाई लिएर यसपटक नेशनल फिल्म अवार्ड दिइएको हो । त्यस्तै गत वर्ष...
नाम र दाम कमाउने मौलिक लोकभाकाहरूको मुहानमा नै खडेरी
यमबहादुर दुरा, श्रावण २४, २०७६
आधुनिकताले लोकसङ्गीतको विकास गर्यो कि विनाश गर्यो ? यो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर लामो बहस गर्न सकिन्छ । यसबारे तर्कवितर्क गरेर रात छिचोल्न सकिन्छ । यसै मेहरोमा आधुनिकताले लोकसङ्गीतमा ल्याएको उज्यालो पक्षबारे एकैछिन चर्चा गरौँ । गाउँका भाका शहरमा भित्रिएका छन्...
शताब्दी पुरुष जोशी अभिनन्दित
काठमाडौं । शताब्दी पुरुष डा. सत्यमोहन जोशीलाई अभिनन्दित गरिएको छ । रोटरी क्लब ललितपुर, मिडटाउनले सोमबार जोशीलाई सम्मान पत्रसहित दोसल्ला ओढाएर अभिनन्दन गरेको हो । सम्मान तथा अभिनन्दन ग्रहणपछि नेपालका प्रख्यात संस्कृतिविद् जोशीले आफूलाई सम्झिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो ।...
‘सेती खोला चाइनेजो फनक्कै घुमेको, माछा छैन नि चाइनेजो जाल केलाई बुनेको’
यमबहादुर दुरा, श्रावण १७, २०७६
आँधीखोला झरेसी भिरालो, सधैँ मलाई मायाको पिरलो । यो लोकगुञ्जनले स्याङ्जाको आँधीखोला र त्यस वरपरको जनपरिवेशलाई चित्रण गर्छ । यसले स्थानीय जनजिन्दगानीको सुखदुःखमात्र समेटेको छैन, खोलासँग सम्बन्धित लोकभाकातर्फपनि इङ्गित गरेको छ । यसै पनि, खोलानाला तथा नदी सधैँभरि सङ्गीतको हिस्सा...
सुपर–३० ले कमायो १५० करोड
काठमाडौं । ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म सुपर३० ले बक्स अफिसमा त सफलता पाइरहेकै छ, साथै सामाजिक मुद्दामा आधारित फिल्म भएका कारण चर्चा बटुलिरहेको छ । फिल्मले ३० जुलाईसम्म १३० करोड़ रुपैयाँ कमाई गरेको थियो । अब भने यसले बक्स अफिसमा...
सांस्कृतिक कलाकर्मीको पुनर्बास नगरमा विष्ट
कञ्चनपुर । नेपाल सांस्कृतिक कलाकर्मी संघ, पुनर्बास नगर समितिको अध्यक्षमा गोमती विष्ट चयन हुनुभएको छ । यस्तै, उपाध्यक्षमा शारदा चौधरी, महासचिवमा अनिता तामाङ, उपमहासचिव भीम नेपाली, कोषाध्यक्ष माया विष्ट चयन भएका छन् । सदस्यहरूमा चन्द्रसिंह ठकुरी, कलाचन्द्र राना, गोरख भट्ट...
लोकगीतः इतिहासको मौखिक स्रोत
यमबहादुर दुरा, श्रावण १०, २०७६
समय रहस्यमय छ । यसको आदि छैन, न त अन्त्य नै । समय सतत् प्रवाहमय छ । समय अदृश्य छ । तर, पनि यसले आफ्नो बाटोमा कुनै न कुनै पदचिह्न छाडेको हुन्छ । समयले छाडेको पदचिह्न नै सम्भवतः इतिहास हो...